[Steam] Portal Beta Hada Ayaa Loo Heli Karaa Linux | Laga soo bilaabo Linux
[Steam] Portal Beta hadda waxaa loo heli karaa Linux
Waxay yihiin Link | | GNU / Linux, Ciyaaraha, Noticias
Kuwa idinka mid ah ee horey u aqriyay qoraaladaydii hore ee ku saabsan Steam Waxaad horeyba u ogaan doontaa in mid ka mid ah ciyaarihii aan rajaynayay in ka badan sawirada aan soo bandhigaa uu yahay Portal, oo ah ciyaar qofkii ugu horeeyay ee ka duwan tan iyo kulankaan waa inaan ka gudubnaa caqabadaha iyo imtixaanada caqli gal ah.
Ciyaartan waxaan ku qaadaneynaa doorka Chell, haweeney u ah maaddo tijaabo ah Sayniska Aperture. Cod dumar ah oo aalado ah ayaa nala hadli doona si ay noogu sheegto imtixaanada, noo hanbalyeeyso, iwm. Imtixaannada oo markii dambena lagu soo wareego xarumihii hore ee Aperture si looga gudbo caqabadaha cadowgu na gelin doono
Haddii aad jeceshahay caqabadaha iyo ciyaaraha meesha ay tahay inaad ku isticmaasho maskaxdaada, kani waa ciyaartaada. Aad loogu taliyay.
Ogeysiis: Beta waxaa la heli karaa oo keliya haddii aad horay u iibsatay ciyaarta qaybteeda loogu talagalay Windows ama Mac. Ciyaarta ayaa ku kacaysa .6.99 XNUMX, laakiin waxaan kugula talinayaa inaad sugto inta lagu sii daynayo dukaanka haddiiba ay bilaabaan dalab kasta.
Bogga ciyaarta ee dukaanka Steam
Waxaan kuu daynayaa xoogaa qabsasho ah oo aan qaatay:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » [Steam] Portal Beta hadda waxaa loo heli karaa Linux
Iga raali noqo inaan ka jawaabo daaqadaha, laakiin jaamacada taasi waa waxa ay u hayaan waxa aan ku barto naqshadeynta garaafka ... laakiin guriga waxaan si hufan ugu heystaa xariirka 'Portal beta' xubnahayga, laakiin si gaar ah maahan waxa ciyaartaasi ku saabsan yahay, lol waan jeclaan lahaa jecel in la ogaado. mahadsanid.
Waa shaqo farshaxanimo isku aaddan.
Asal ahaan waxaa loo kala saaray inay tahay xujo, waxay ku saabsan tahay heerarka gudbinta iyo badbaada ilaa dhamaadka
By the way CA DAMEERKA WAA BEEN !!!! > _
Waan jeclahay ciyaarta noocan ah, mid kastoo kale waxaan lumiyaa XD
Waxay i siiyeen waqti hore xddd, horeyba waan u soo degsadaa
Keeggu waa been.
sifiican ayaa loogu tijaabiyay nvidia waxay u shaqeysaa si qumman, naxariista ayaa ah inaanan arkin tarjumaada Isbaanishka, kaliya Ingiriiska iyo Ruushka laakiin hey xd
Liiska cayaaraha, midig-guji magaca ciyaarta, xulo Guryaha oo furo tabka Luqadda oo xulo Isbaanish.
D8 ayaa maqan
Hagaag, ma garanayo sababta ay noqon doonto, waxay ahayd inaan soo dejisto oo waxaan ku haystay Isbaanish.
Miyaad isticmaaleysaa xasiloonida ama Steas betas?
Ka sokow, ma garanayo sababta aanan u heli karin magacaaga isticmaale marka aan ku raadinayo
Ma waxaad ii raadisay pandev92? xdddd, taasi waa naanaydayda ... waa hagaag, ma garanayo! laga yaabee in hadhow la hagaajiyo ama wax uun, ugu yaraan kiiskeyga xd
Ma ogi, fiiri haddii aad ka heli kartid tayda, waa son_link
Haddii qof kale doonayo inuu igu daro, way samayn karaan
Iyagu waa Link, ogolaanshahaaga waxaan kuugu soo diray martiqaad Steam.
Ku jawaab Gambi
@Gambi Waxaan u dhigay xaydhahayga si uu ugu daro kan uu rabo (waa hadii aysan ahayn ujeedooyin xun)
Haddii qofna ciyaaro Counter Strike: Ilaha guud ahaan waxaan ku jiraa server-ka Pishas Bravas (fagaaraha waxaan ku leeyahay saxeex xogta ku jirta server-kaas, waxaan ka qorayaa Nintendo 3DS markaa anigu hadda waan siin karaa IP-ga ama magaca dhameystiran server, sidoo kale waxaan u maleynayaa inaad si toos ah u raadin karto si aad u aragto haddii aan ka imid ciyaarta lafteeda)
Mawduuca Ubuntu ee Steam runti waa quruxsan yahay 😮
waxay ku jirtaa yaourt xD
Fantastic!, Xagaaga waan rakibaa, hada waqti uma haysto xD
Cajiib! Waxay igu siin doontaa wadno xanuun warkan. Isla marka aan rakibo Arch, waxa ugu horreeya ee aan sameyn doono waa inaan rakibo Portal <3
Steam wuxuu ku jiraa rasmiga rasmiga ah ee Arch sidaa darteed kaliya pacman -S uumi waana taas ^^
Linux 1% waa Been !! Waan jeclahay ciyaartan 🙂
1% haa ... 1,5% waxaa laga yaabaa haa, ama uguyaraan taasi waa waxa aan sidoo kale ku jirno uumiga .-.
Miyey la jaan qaadi doontaa Debian Squeeze ama Wheezy? Sababtoo ah waxaa la ii sheegay inaan ku qasbanaado inaan gacanta ku cusbooneysiiyo darawalka fiidiyowga ee 'Mesa' haddii aan haysto Intel isku dhafan.
en64 jajab way adagtahay in la rakibo, waxa kale ayaa ah in wadayaasha Intel ... hadii ay ku siiyaan 30 fps mahadsanid ...
Beta L4D2 ayaa sidoo kale soo baxay! 🙂
Waan sugi doonaa ilaa ay kala bar ka baxdo, si aan u caddeeyo ehehe
Waxaan helay cusbooneysiin, horay ayaan ugu haystay Isbaanishka xd
War aad u fiican Gamers!
Sidoo kale tani waxay Linux ka dhigeysaa mid aad u soo jiidaneysa dadka isticmaala Windows =)!
Waxa ugu xun ee ku dhici kara qalliinkaan la jecel yahay ayaa ah inuu buuxiyo ciyaaro. Maya maya maya xun xun, laakiin aad u xun.
Ciyaaraha, kahadlida kumbuyuutarrada, waxaan doorbidayaa Windows, halkaas ayaan ku rakibayaa dhammaan waxyaabaha aan doonayo. GNU / Linux u daa waxyaabo kale.
Ku jawaab r3irm3 m4s
Fikradaha noocaas ah, kama gudbeyno sida loo maleynayo 1%, Nidaamka Howlgalku waa inuu awood u yeeshaa in loo isticmaalo wax walba, waxaad u adeegsaneysaa waxaad rabto oo dhan. Oo ha ka buuxin ciyaaro.
Horaan u rakibay. Si fiican ayey u socotaa, laakiin dhawaqa ayaa mararka qaarkood istaaga shaqada: /
Redmine 2.1.0 ee Ubuntu 12.04, Canaima ama Debian 6 oo leh Apache2 iyo PostgreSQL
Libreoffice ayaa loo heli karaa Android (nooca al-pre-alpha)